विजनेश – CBKhabar.com | Nepali News Portal
stock, banking, market and business news
By सन्दीप खत्री / breaking, विजनेश, समाचार
बैशाख १ । नेपालको सात प्रदेशका विभिन्न ५० ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुने भएको छ । आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि निर्माण हुने पक्का भएको हो । काठमाण्डौ उपत्यकामा सात वटा चार्जिङ स्टेशन राखिने छ । प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, भद्रपुर, कन्काई, मोरङको विराटनगर …
सात प्रदेशका ५० ठाउँमा विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेशन बन्ने, आज ठेक्का सम्झौता विष्तृतमा
By सन्दीप खत्री / विजनेश, समाचार
चैत २७ । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको आइपिओ आज बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीले गत चैत ६ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको आइपिओमा १५ लाख ६५ हजार ५३० आवेदकले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये पाँच हजार ७२८ को आवेदन रद्द भएको छ । योग्य कायम भएका १५ लाख ५९ हजार ८०२ आवेदकलाई गोलाप्रथामा समावेश …
पर्यो कि परेन ! सिंगटी हाइड्रोको आइपिओ ? विष्तृतमा
गैँडाकोट, चैत २० । दिप प्रज्वलन गरी गैँडाकोटमा ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइएको छ । मर्यादीत व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी नारा सहित दिवस मनाइएको हो । सहकारी समन्वय मञ्च गैँडकोट र गैँडाकोट नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा नगरपालिका परिसर भित्र दिप प्रज्वलन सहित दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत …
दिप प्रज्वलन गरी गैँडाकोटमा ६४ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवश मनाइयो विष्तृतमा
फागुन २७ । तनहुँको मानहुँकोटमा चार अर्ब लगानीमा केबलकारसहित रिसोर्ट बनाउने प्रस्ताव परेको छ । केबलकार, जिपलाइनसहित रिसोर्ट बनाउने प्रस्ताव परेको हो । व्यास हिल्स प्राइभेट लिमिटेडेको नाममा उद्योगी आनन्द बतास समूहले करिब चार अर्बको लगानी गर्ने गरी यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको प्रस्तावपछि व्यास नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ९डीपीआर० का लागि स्वीकृत प्रदान …
तनहुँको मानहुँकोटमा केबलकारसहित रिसोर्ट बनाउने तयारी विष्तृतमा
फागुन २१ । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनसहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएसँगै हवाई भाडामा पनि वृद्धि भएको छ । वायुसेवा कम्पनीहरुले हवाई भाडामा लाग्ने सरचार्ज वृद्धि गरेका हुन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) का अनुसार स्वचालित प्रणाली अनुसार मूल्य बढाउने निर्णय भएको छ । बढेको भाडा शुक्रबारबाट लागू हुने भएको छ । नेपाल आयल …
हवाई भाडा बढ्यो विष्तृतमा